Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zeSaint Kitts neNevis » I-St Kitts kunye neNevis ngoku batyeleleyo ukuba bathathe uvavanyo lwe-COVID-19
I-St Kitts kunye neNevis ngoku batyeleleyo ukuba bathathe uvavanyo lwe-COVID-19
Urhulumente weFederal of St Kitts kunye neNevis bapapashe Amandla akhawulezileyo (Covid-19(No.13) Regulations, 2020. Isebenza de kwayi-29 ka-Agasti, imimiselo icacisa izikhokelo ezitsha zelizwe njengoko lilungiselela isigaba salo sokuqala sokuvula imida kwakhona. Ngokubhekisele kubatyeleli bamanye amazwe, ukusukela ngoMvulo, nge-10 Agasti, urhulumente wabhengeza ukuba bonke abakhweli kufuneka bathathe uvavanyo lwe-RT-PCR iiyure ezingama-72 ngaphambi kokufika kweli lizwe. Iziphumo mazingeniswe nge-imeyile.
Ngamatyala ali-17 kuphela aqinisekisiweyo kunye nokusweleka okungu-zero, iSt Kitts kunye neNevis zisebenze ngokukuko ekusasazeni intsholongwane. Ngelixa imida ihleli ivaliwe, kwisigaba sokuqala sokuvulwa kwakhona, ilizwe liyakwamkela abemi kunye nabalingane babo, abatyali mali kunye nabafundi ababhalise kumaziko emfundo kwiziqithi.
U-Abdias Samuel, uSihlalo we-COVID-19 National Task Force, ucacisile ngexesha leZiko lokuSebenza ngokuNgxamisekileyo ngo-Agasti 8 ukuba: “Siyaqhubeka nokulawula imida yethu, imida yethu ivaliwe. Nangona kunjalo, sithe sihamba ngezigaba apho siqale khona ngokulungiselela abantu bethu, emva koko safudukela kubahlali bethu. [Ngokuphathelele] nabahlali, siyazi ukuba sinabantu abaliqela abasebenza eSt Kitts naseNevis kwaye banegalelo kwimisebenzi yethu yezoqoqosho, kungoko ke sibanike ithuba lokuba babuye. ”
Ukusukela ngo-1984, iSt Kitts kunye neNevis besamkela abatyali mali bamanye amazwe ukuba babe ngabemi ngoBumi babo yiNkqubo yoTyalo mali. Ukuze umntu afaneleke, umfaki-sicelo makapase uhlolo lokhuselo oluyimfuneko kwaye emva koko banokwenza igalelo kuqoqosho kwiNgxowa-mali Yokukhula Ezinzileyo. Le yeyona ndlela ikhawulezayo neyona ichanekileyo eya kubumi besibini eSt Kitts naseNevis. Ukubuya, abatyali mali bafumana izibonelelo ezinjengokuhlala kwilizwe elikhuselekileyo, elilawulwa ngentando yesininzi, ukukwazi ukugqithisela ubumi babo kwizizukulwana ezizayo, kunye nokwanda kokuhamba kwihlabathi liphela ukuya ngaphezulu kweendawo ezili-150. I-St Kitts kunye ne-Nevis yenye yeepaspoti ezomeleleyo kulo mmandla malunga nokuhamba ngaphandle kwe-visa-eyona nto iphambili kuMphathiswa Wezangaphandle we-Federation uMark Brantley.